Fil d'actualités du 06/04/2020
03/04/2020 - 13:30 : COVID: Niampy olona 6 indray ny voa ka vokatry ny fifampikasohana tamin'ireo efa voa avokoa ireo tranga ireo. 65 izany izao no voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara.
Archive du 20200206
HCC Ambohidahy Mandidy ny governemanta hanaja lalàna
Nivoaka omaly alarobia 5 febroary ny fanapahan-kevitra laharana 04-HCC/D3, avy amin’nyfitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) mamaly ny fitoriana napetraky ny filohan’ny
Alain Ratsimbazafy « Tsy mirindra ny fitantanana ny raharaham-pirenena »
Tsy mirindra ny fitantanana ny raharaham-pirenena eto matoa misy tranga maro samihafa miseho eto, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Atsimondrano, Alain Ratsimbazafy,
Kaomorianina nampiahiahy Tsy coronavirus no nahazo azy
Nandefa taratasy miantefa amin’ny fanjakana Malagasy ny Ambasadaoron’i Kaomoro eto Madagasikara amin’ny fahafahan’ilay vehivavy kaomorianina Akibati Mouderé nahiana ho tratry ny Coronavirus tonga teto Madagasikara.
Filoha Rajoelina mivady Miomana sahady amin’ny 2023…
Vita izay ny fametrahana olona tamin’ny alalan’ny fifidianana. Azo ambara fa efa marin-toerana tsara ny fanjakana Rajoelina taorian’ny fifidianana filoha, solombavambahoaka, ben’ny tanàna, izay nahazoany ny maro an’isa.
Diso kajy hatrany am-boalohany Mandroso mihemotra ny fitondrana
Vantany vao tonga eo amin’ny fitondrana dia manomboka ny asa. Herintaona nihodinkodina fotsiny avy eo nosoloina ny ekipa.
Mafana ny toe-draharaha Raikitra ny valifaty politika
Namoahan’ny Procureur Général eo anivon’ny Fitsarana Ambony Antananarivo Didy fandrarana tsy afaka hivoaka ny sisintanin’i Madagasikara na IST i Ny Rado Rafalimanana.
Anosimahavelona-Tana IV Lasan’ny Sinoa ny moron’Ikopa
Roso amin’ny fanorenana toeram-ponenana na tanàna vaovao manamorona ny fefilohan’i Ikopa, eny Anosimahavelona Boriborintany faha-4,
“Salon AVENIR et FORMATION” Eny Mahamasina ny fotoana rahampitso sy ny sabotsy
Hotontosaina etsy amin’ny Palais des Sports Mahamasina manomboka rahampitso zoma 7 febroary sy ny sabotsy 8 febroary 2020 ny “Salon AVENIR et FORMATION”,
Ajesaia Antanikatsaka Efa manapariaka ny fampianarany taninketsa any amin’ny Faritra
Tena mampirehareha ny mpitantana ny ekipan’ny Ajesaia “Association des JEunes Sportifs de l'Avenir Inter-Arrondissements » avy eny Antanikatsaka,
Fananganana ny Kianja Barea Hanomboka ny tapaky ny volana martsa ny tena asa
Nanomboka ny 21 janoary teo ny 1 volana sy 3 herinandro, dingan’ny fandravana ireo faritra tokony hohavaozina sy
Politikan’ny baolina kitra Malagasy “Mondial” no tanjona, hoy ny filohan’ny FMF
Mbola nampita hafatra ho an’ny Malagasy tamin’ny alalan’ny mpanao gazety ara-panatanjahantena teto Antananarivo omaly alarobia 05 janoary 2020 ny filohan’ny FMF “Federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra”,
Volley-ball C.C.C Zône 7 andiany faha-26 Nitsoaka an-daharana omaly ny ekipa seiseloa
Ekipa lehilahy 16 sy vehivavy 12 (klioba 8 ho an’i Madagascar, 7 ho an’i Maurice, 4 ho an’i Seychelles, 4 ho an’i La Réunion, 4 ho an’i Mayotte ary 1 ho an’i Comores)
Manome rariny ny antenimierandoholona ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo momba ny lalàmpanorenana mahakasika ny fitoriana nataon’io andrim-panjakana io, raha halalinina ny fanapahan-kevitra omaly.
Aretina Coronavirus Mitombo ny fatiantoka, nidina 8% ny tsenam-bola any Sina
Mety hanahirana ny Sinoa ny hanarina ny rafitra ara-bolany aorian’izao aretina Coronavirus mahazo ny fireneny izao. Midina hatramin’ny 8% ny tsenam-bola amin’izao,
Irak Mizara roa ny fanoherana
Manomboka mafana ny maripana eo amin`ny tontolo politika any Irak. Manomboka mizara vondrona roa mazava ny fanoherana any an-toerana. Ny “sadristes” dia mpanohana an`i Moqtada al-Sadr.
Vidin-javatra andavanandro Manomboka ny fanararaotana
Araka ny efa nampoizina, raikitra ny fanararaotana taorian’ny olana sedrain’ny firenena noho ny loza voajanahary.
Fikasana hamono vazaha Dimy mianadahy no voasambotra tany Mahajanga
Vazaha iray no saika namoy ny ainy noho ny vono natao azy tao Mahajanga ny fiandohan’ny volana janoary lasa teo.
Analakininina hopitalibe Toamasina Trano 7 no hotrongisina rahampitso
Trano miisa fito miorina ao Analakininina hopitalibe Toamasina, mitondra ny anarana villa Linah, ao anatina tany mirefy 7 ara sy 17 sa
Loka amin’ny hazakaza-tsoavaly Mandany hatrany amin’ny 20.000 Ar isan’andro ny olona iray
Ankoatra ny fanaovana karatra dia anisan’ny lalao sy loka iray tena mahavariana olona maro, indrindra fa ny lehilahy ny hazakaza-tsoavaly eto amintsika.
HAFARI Malagasy Miady amin’ny tsy fananan’asa mahazo ny tanora
Ny 80 %-n’ireo tanora Malagasy vao afa-panadinana Bakalôrea ankehitriny no tsy afaka manohy ny fianarany eny amin’ny anjerimanontolo intsony noho ny fahasahiranana.
Fikambanana FISEMARE « Ho fantatra tsy ho ela ny fisondrotan-karama ho an’ny tsy miankina. »
Toy ny fanaony isaky ny 4 volana dia nanome ra maimaimpoana tetsy amin’ny banky fitehirizan-dra CHU-JRA Ampefiloha indray ny avy eo anivon’ny fikambanana
Antananarivo Atsimondrano Vita eo no ho eo ny « certificat juridique » manomboka izao
Raha nanana olana goavana tamin’ny fakana ny « certificat de situation juridique » ho an’ny tany teo anivon’ny sampandraharahan’ny fananantany ireo mponina eny amin’ny
Takaitra navelan’ny andro ratsy Nankahery an’i Madagasikara ny Praiminisitra Indiana
Manoloana ny fahavoazana nahazo an’i Madagasikara tamin’ireny fisiana andro ratsy izay namoizana ain’olona sy naha traboina ny faritra maro ireny,
Fianakaviana 400 isa traboina tao Ambatondrazaka Notoloran’Ambatovy fanampiana mitentina 20 tapitrisa ariary
Manoloana ny famaritan’ny avy eo anivon’ny biraom-pirenena misahana ny loza sy tandindon-doza na BNGRC ny voina nitranga taorian’ny fandalovan’ny andro ratsy tao
Fisorohana ny fahatondrahan’ny rano Esorina ireo mponina amin’ny sisin’Ikopa sy Sisaony
Araka ny volavolana didim-panjakana naroson’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia nankatoavin’ny filankevitry
Mandrosoa Ivato Zanaka manampahefana nandratra olona
Ny alahady 02 febroary lasa teo, telo lahy nandratra sy nampihorohoro olona tao amin’ny «bar» iray tetsy Mandrosoa Ivato.
Roalahy tratry ny vela-pandriky ny polisy Azo sambo-belona niaraka tamin’ny basy
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny Commissariat Boriborintany faharoa Mangarano ireo jiolahy roa niaraka amin'ny basy poleta sy bala.
Kongresy Amerikanina Norovitin’i Nancy Pelosi ny kabarin`i Donald Trump
Sivy volana mialoha ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia, nilokaloka ny fampanantenana nataony nandritra ny fampielezan-kevitra sy ny fihatsaran`ny toekarena ny filoha Donald Trump manoloana ny